KUKHALWA ngothisha wasePhambili High, eRossburgh, osabisa abafundi isibhamu uma bebanga umsindo
Nkosikhona Cele | May 21, 2022
KUKHALWA ngothisha wesifazane esikoleni iPhambili Secondary eRossburgh, okuthiwa uvele adonse isibhamu akhombe abafundi ngaso uma bebanga umsindo.
Abazali bezingane ezifunda kulesi sikole bathi bakhathele wubuqhwaga bukathisha okuthiwa usatshiswa okwenyoka, ngisho ozakwabo bathuka ubala uma beseduze naye. Abanye othisha kuthiwa uma beke bathi nkente, ubakhomba ngesibhamu kuthule umoya esikoleni.
Ngokuthola kweSolezwe ngoMgqibelo, ngoMsombuluko kuphazamiseke ukufunda esikoleni ngesikhathi kugasela abazali babafundi kungazelele muntu, befuna izimpendulo ngalo thisha.
Kuthiwa abazali ebebedinwe begane unwabu bebelimisa ngesihloko elokuthi sebekhathele yimikhuba kathisha okuthiwa wenza into ayithandayo ngesikhathi esithandwa nguyena.
Ngalolu suku abazali kuthiwa baqhinqe emnyango isikhathi eside belinde lo thisha ukuthi afike ukuze bezomxosha kodwa kuthiwa ugcine engafikanga.
Omunye umzali ocele ukungadalulwa ngenxa yokwesabela inhlalakahle yengane yakhe, uthe sekukaningi uthisha ebandakanyeka ezintweni ezingalungile kodwa akukho sinqumo esithathwayo ngaye.
“Sesikhathele yilo thisha, sikhathele manje ukuba nothisha ophatha isibhamu esikoleni. Ngaphezulu kwalokho wake wakuzwaphi ukuthi abafundi bathuliswe umsindo ngesibhamu. Simile nje asigudluki kulokhu esikushoyo, sithi asimfuni lo thisha akahambe hhayi kusasa manje,’’ kusho umzali ngokucasuka.
UMnuz Surprise Makhethwa, ongusihlalo wesigungu esengamele ukusebenza kwesikole, ulimise ngesihloko elokuthi abasamdingi lo thisha emagcekeni esikole. Uthe sebekhathele ngoba wenza kubukeke sengathi kulesi sikole ikwamachangca.
“Ngeke phela sibe nothisha owenza noma yikanjani emagcekeni esikole ekubeni sinabantwana bethu esibalethle lapha esifuna ukubabona beba nekusasa eliqhakazile,” kuchaza uMakhethwa.
Kuvela ukuthi yena uthisha wake waxoshwa kodwa wabuya ngendlela engaqondakali.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Mlotshwa uthe kuyamangaza ukuthi kunothisha ofundisa ephethe isibhamu. Uthe izikole zinomthetho wokuthi asingeni isikhali, ingasaphathwa eyesibhamu. Uthembise ngokuthi uMnyango uzophuthuma kulesi sikole ukuze utholisise kuthishanhloko ukuthi kwenzakalani ngalo thisha.